Mmepụta ngwaahịa - Chapman Technology Co., Ltd.
Na Onye kere Chapman, anyị ghọtara asọmpi ihu ibe anyị na azụmaahịa anyị n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Ndị anyị na ha na-azụ ahịa atụkwasịla otu ndị ọrụ injinia nwere ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri ise iji kwado uru asọmpi ha.
Anyị na-elekwasị anya na nkwukọrịta oge niile na usoro niile, gụnyere usoro a haziri, iji hụ na ngwa ahịa onye ahịa anyị na-aga nke ọma. A raara onye njikwa ihe omume raara onwe ya nye nye oru ngo obula. Site na echiche nke ndị mmekọ, ndị ọrụ aka anyị nwere ike inye nhazi na mmepe nke usoro ngwaahịa na ngwa ngwa niile. Nke a na - eme ka ndị mmekọ anyị nwee ogo dị elu, ogo na arụmọrụ bara uru maka ngwa ọrụ ọ bụla ewepụtara.
Ndị otu anyị kwenyere na ọkwa niile na mmepe nke ngwa dị mkpa. Anyị na ndị anyị na ha na-azụkọ ahịa na-arụkọ ọrụ ọnụ iji hụ na ihe ịga nke ọma na ọkwa ọ bụla. Anyị ntị maka ngwaahịa mmepe, imewe maka n'ichepụta na itinye n'ọrụ nke ebu na-enyocha na-eme ka imewe na-atụ aro na-enye anyị azụmahịa mmekọ na a asọmpi onu site ná mmalite.
Anyị na ndị ahịa arụ ọrụ ịzụlite ngwaahịa na ụfọdụ mpaghara ndị a:
1. Egwuregwu na n'èzí
2. Agagharị / Nnweta
3. Ahụike / Ahụ ike
4. Ngwaọrụ Mmepụta
5. Ihe eji eme ulo oru
6. Ihe owuwu
Nzọụkwụ mbụ ： Echiche - Ihe oru ngo a malitere n’echiche gi banyere ngwa ahia. Ka anyị nyere gị aka ịkọwapụta ọrụ ya dị mkpa ma jiri anya nke uche hụ usoro ị ga-arụ ọrụ kacha mma maka ahịa gị. Anyị ga-atụle ma tụlee inyocha ihe ọgụgụ isi dị ugbu a.
Nzọụkwụ nke abụọ ： Nchọpụta zuru ezu- Mgbe anyị na-ekpebi NJ nke ngwaahịa ọhụrụ, ndị ahịa ahịa anyị kwesịrị ime nchọpụta ahịa iji hụ na ngwaahịa anyị na-ezute ọnọdụ ahịa ahịa ugbu a na ọchịchọ ahịa. Dịka nsonaazụ nyocha anyị nke ahịa ahụ, anyị ga-ebuli ma melite usoro ngwaahịa, ọrụ, ma kwe ka ngwaahịa anyị banye ahịa ngwa ngwa maka ire ere.
Nzọụkwụ nke atọ ：Imewe - Iji mepụta ngwaahịa kachasị mma maka ụdị azụmaahịa gị, anyị ga-eji usoro imewe maka nrụpụta (DFM) ka imepụta wee rụọ ọrụ nke ọma dịka o kwere mee Echiche dị na mmemme mmemme 3D anyị, anyị nwere ike ịme mkpebi gbasara atụmatụ, ụdị iheomume na akụrụngwa. Anyị ga-ekwenye na ụzọ kachasị dị mma maka ngwaahịa gị tupu ịga n'ihu na-ewu usoro.
Nzọụkwụ nke anọ ：Prototype - N'ime ụlọ ọrụ anyị zuru oke, anyị nwere ike ịkpụ, igwe igwe, mepụta, mbipụta 3D, waya, yana mmemme ọ bụla na akụrụngwa tupu ị gbakọta ụdị prototype gị. The prototyping adọ nwere ike ikwugharị dị ka iche iche aghụghọ na-atụle na-anwale.
Ise nzọụkwụ ：Mmepụta - Dika ndi okacha amara n'icheputa ihe, imeputa onwe ya, na usoro ulo oru ulo oru, anyi na enyere gi aka meputa ngwa ahia gi site na iwere uzo di iche-iche. Ike anyi di n’ime ulo n’eme ka anyi mejuputa mmeputa mmeputa.
Nke isii nke ：Nzipu - Ọgbọ mbu nke ngwaahịa gị adịla njikere maka mmepụta na ahịa. Ga-enweta ngwugwu ngwugwu zuru oke, ihe ngosi, yana nke nwere obere ọsọ na ngwaahịa. Ga-enwe nkwado anyị ka ị na-agafe usoro ndị ọzọ.
Ọ dị mkpa iji nyochaa azụmahịa azụmahịa na "uru azụmahịa" mgbe ị na-emepụta ngwaahịa. Ndị otu anyị ga-eji obi ike na-enyere gị aka ịtụle ngwa ngwa ngwa ngwa wee duzie gị site na nyocha nke nsogbu gị nsogbu iji dozie.